မိုင်တစ်ထောင် ခရီးရဲ့အစ ပထမခြေတစ်လှမ်း မောင်ညွန့် (မင်းကျောင်းတိုက်) | Myanmar My Always
Why does confrontation-style politics not work with the current regime in Myanmar? →
မိုင်တစ်ထောင် ခရီးရဲ့အစ ပထမခြေတစ်လှမ်း မောင်ညွန့် (မင်းကျောင်းတိုက်)	Posted on November 8, 2011	by nyuntshwe ပြည်တွင်းမှာတော့ တိုးတိုး၊ ပြည်ပမှာတော့ ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် အော်နေတဲ့ အသံတွေကတော့ ရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက်၊ (တနည်းအားဖြင့် ပြောင်မပြောသော်လည်းပဲ) ကျွန်တော်များ စစ်အစိုးရလက်အောက်မှာပဲ ဆက်နေပါမယ် ဆိုတဲ့ လှုံ့ဆော်သံတွေ ဖြစ်တယ် ခင်ဗျ။ ပြည်သူတွေနဲ့အတူ ကျွန်တော်တို့ကတော့ စစ်အစိုးရလက်အောက်မှာ မနေချင်တော့ဘူးခင်ဗျ။ အနည်းဆုံး ပြည်သူလူထုဖက်က တရားဝင် ပြောနိုင် ခုခံနိုင်တဲ့ သူတွေ၊ တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် အခွင့်အရေးတွေကို တောင်းယူ တိုက်ယူပေးနိုင်မဲ့ သူတွေ ပါဝင်တဲ့ ကူးပြောင်းရေး အစိုးရလက်အောက်ကို မြန်မြန်ရောက်ချင်ပြီခင်ဗျ။ ပြီးခဲ့တဲ့လကလဲ “မိုးကျဒီမိုကရေစီ” အကြောင်း ရေးပြီး အာဏာရှင်နိုင်ငံတွေ ဘယ်လို စနစ်ပြောင်းကြတယ်ဆိုတာ အကိုးအကားနဲ့ တင်ပြခဲ့သလို၊ အခုလဲ ဘာကြောင့် မဲပေးသင့်သလဲဆိုတာကို အဓိက ရေးလိုက်တယ်ခင်ဗျ။
အပြစ်တင်ချင်တဲ့ ဆန္ဒစောနေသူတွေကတော့ ဒီစစ်ခေါင်းဆောင်တွေက ဘယ်လောက်ဆိုးတာ၊ ယုတ်တာ စသဖြင့် ဆင်ခြေအမျိုးမျိုးပေးပြီး၊ အပြုတ်ချရမယ် ဘာညာ ပြောပါလိမ့်မယ်။ ခင်ဗျား ဘယ်တော့ ချမှာလဲလို့မေးကြည့်ပါလား၊ မြက်လျှော ဖြစ်သွားတာ အားလုံး မြင်ကြရပါလိမ့်မယ်။ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ပြောနေသူတွေဟာ လက်ဖက်ရည်ပန်းကန်လုံးထဲက မုန်တိုင်းလေးတွေချည်းပဲခင်ဗျ။ ကိုယ့်စီးပွားအတွက် နေ့မအား ညမအားလောက် အလုပ်လုပ်တယ်၊ ဒါမှမဟုတ်၊ လူရည်လည်တဲ့သူတွေဆိုရင် အမေရိကန်အစိုးရအပါအ၀င် အဖွဲ့အစည်းကြီးတွေကနေ ထောက်ပံ့ငွေရအောင်လုပ်ပြီး တစ်လတစ်လ ဒေါ်လာထောင်ဂဏန်း လခယူပြီး တိုင်းပြည်လက်ညှိုးထိုး ဇိမ်ခံ နိုင်ငံရေးလုပ်စားသူများသာ ဖြစ်တယ်ခင်ဗျ။ နိုင်ငံရေးကို ထဲထဲဝင်ဝင်လဲ မလေ့လာသလို အများစုက ဘာမှကို မလေ့လာပါဘူး၊ ပေါ်ပင် အီးမေးလ်လောက် ဖတ်၊ မြန်မာဂျာနယ်တချို့က ဆောင်းပါး တစ်ပုဒ် နှစ်ပုဒ်လောက် ဖတ်ပြီး နိုင်ငံရေးကို ပါးစပ်နဲ့လုပ်တယ်ခင်ဗျ။
ဒီချုပ်က ဒီမိုကရေစီရေးလုပ်ကြတဲ့ အဖွဲ့တိုင်းလောက်ကို မဝေဖန်ပေမဲ့ ကိုယ့်အထဲက ပဲ့ထွက်သွားသူတွေထောင်တဲ့အဖွဲ့ကိုတော့ သဲကြီးမဲကြီးကို ဆော်နေတော့တာပဲ ခင်ဗျ။ ဒီချုပ်ကဆော်တော့ ကိုအောင်မိုးဝင်းတို့လို ပြည်ပက အမာခံလုပ်နေတဲ့သူတွေကလဲ ဆော်ရတော့တာပေါ့ဗျာ။ ကဲ အဲဒီအဖွဲ့ကို ပြည်သူတွေက လုံးလုံးကို မထောက်ခံဘူးတဲ့လား။ ထောက်ခံတဲ့လူတွေ ပြည်တွင်းမှာ ရှိသလို ပြည်ပမှာလဲ အနည်းအကျဉ်းဖြစ်စေ ရှိနိုင်တယ်ဆိုတာ ငြင်းမလား။ အပြတ်မငြင်းနိုင်ရင် အဲဒီအဖွဲ့ကို တိုက်ခိုက်တာဟာ အနည်းဆုံး ပြည်သူလူထု တစိပ်တပိုင်းကို တိုက်ခိုက်တာနဲ့ အတူတူပဲ ဆိုတာကော သတိထားမိကြရဲ့လားခင်ဗျ။ နောက်ပြီး ခင်ဗျားတို့ တဖွဖွအော်နေတဲ့ ဒီမိုကရေစီရဲ့ အနှစ်သာရ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ အနည်းစုရဲ့ဆန္ဒကိုလည်း လေးစားရမည်ဆိုတာ ပါးစပ်သက်သက်ပဲလား ခင်ဗျ။
A Myanmar, Buddhist, pacifist, and pragmatic person who believe that we are what we think. That leads him positive thinking and he sees the worldabeautiful place, but he still likes to keep trying forabetter and more beautiful world.	View all posts by nyuntshwe →	This entry was posted in Politics. Bookmark the permalink.	← Hello world!